ငွေမက်တယ်လို့ ပြောမလား? ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ အတွေ့ကြုံလေးပါ။ - Tameelay
ငွေမက်တယ်လို့ ပြောမလား? ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ အတွေ့ကြုံလေးပါ။
မိန်းခလေးတစ်ယောက်ကို ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင် ပထမဆုံး အလှကို ပြည့်လေ့ရှိကြတယ်။
ပြီးမှ ကျန်တဲ့အချက်လတ်တွေကို ကြည့်ကြတယ်။
“မိန်းခလေးတွေက ယောကျာ်းတစ်ယောကို ကြည့်တော့မယ်ဆိုရင် ငွေရေး ကျေးရေး နဲ့ အလုပ်ကို ကြည့်ကြတယ်။
နောက်မှ တခြားဟာတွေ ကြည့်ကြတယ်။
ယောကျာ်းလေးလည်း သူချစ်ဖို့ အလှပကို ကြည့်ကြတယ်။ အလှကလည်း ချစ်စေတဲ့ အချက်ထဲတစ်ခုပါတယ်။
အလုပ်နဲ့ ငွေက မိမိဘဝနဲ့ အလှပ လုံခြုံစေဖို့ အကြောင်းခံထဲမှာ တစ်ခုဘဲ။
မိန်းမသားတွေက အားအင်ချီနည်းတဲ့ အပေါ်မှာ ခိုလုံစရာ ရှိချင်ကြတယ်။ မင်းရဲ့ ထံပါးမှာ ခိုလုံစရာမရှိရင် ဘယ်သူမှ လာမှာ မဟုတ်ဘူး။
အလှပဆိုတာ ယောကျာ်းတစ်ယောက်မှာ အထင်ကြီးစရာ မဟုတ်ဘူး။ လှတာကို ကြည့်ပြီး ဗိုက်မတင်းနိုင်ဘူး။
လှလို့ ဆိုပြီး ပိုက်ဆံ လာပေးမဲ့သူ မရှိပါဘူး။
ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်မှာ ပညာရှိရမယ်၊ ကိုယ်ခြေထောက်အပေါ် ကိုယ်ရပ်တည်နိုင်ရမယ်၊
ဝမ်းစားအတွက် ရှာနိုင်တဲ့ အရည်းချင်းရှိရမယ်။
ဘယ်သူမှ ကိုယ်သမီးချောလေးတွေကို အလုပ်မရှိအကိုင်မရှိတဲ့ပညာမဲ့နဲ့ သဘောမတူချင်ကြဘူး။
မင်းဆိုရင်ရော မင်းသမီးကို သဘောတူမလား?
ဒါကို ငွေမက်တယ်လို့ ပြောလို့မရဘူးလေ။
တချို့မိန်းခလေးတွေကို ရုပ်ရည်ကို ကြည့်ပြီး အိမ်ထောင်ဖတ်ရွေးလိုက်ကြတယ်။
သူ့အဖေချမ်းသာလို့ သားကို ရွေးလိုက်တယ်။
အဓိက သူကိုပဲ ကြည့်ပါ..
“သူ ဘာတတ်လဲ? ပညာရှိလား?
အလုပ် လုပ်တတ်လား? ကိုယ် ဘဝလုံခြုံနိုင်မလား? ဆင်းရဲနေသည်ဖြစ်စေ ရွေးချယ်လိုက်ပါ။
သူက ဘာမှမတတ်ရင် ကိုယ်ဒုက္ခဘဲ ရောက်မယ်။ မျက်နှာငယ်ရမယ်၊ စိတ်သောက ရောက်မယ်။
“တချိန်ကို မှန်ကြည့်လိုက် မျက်နှာသစ်ဆေး လိမ်းနေတဲ့သူလား?
နေပူမှာ အသားမဲမှာ ကြောက်တတ်တဲ့ ယောကျာ်လား? ဟိုလူကိုလည်း ဒီလူကိုလည် ကြောက်နေတတ်သူလား?
Qurban ilahi ….
မိနျးခလေးတဈယောကျကို ရှေးခယျြတော့မယျဆိုရငျ ပထမဆုံး အလှကို ပွညျ့လရှေိ့ကွတယျ။
ပွီးမှ ကနျြတဲ့အခကျြလတျတှကေို ကွညျ့ကွတယျ။
“မိနျးခလေးတှကေ ယောကျြားတဈယောကို ကွညျ့တော့မယျဆိုရငျ ငှရေေး ကြေးရေး နဲ့ အလုပျကို ကွညျ့ကွတယျ။
နောကျမှ တခွားဟာတှေ ကွညျ့ကွတယျ။
ယောကျြားလေးလညျး သူခဈြဖို့ အလှပကို ကွညျ့ကွတယျ။ အလှကလညျး ခဈြစတေဲ့ အခကျြထဲတဈခုပါတယျ။
အလုပျနဲ့ ငှကေ မိမိဘဝနဲ့ အလှပ လုံခွုံစဖေို့ အကွောငျးခံထဲမှာ တဈခုဘဲ။
မိနျးမသားတှကေ အားအငျခြီနညျးတဲ့ အပျေါမှာ ခိုလုံစရာ ရှိခငျြကွတယျ။ မငျးရဲ့ ထံပါးမှာ ခိုလုံစရာမရှိရငျ ဘယျသူမှ လာမှာ မဟုတျဘူး။
အလှပဆိုတာ ယောကျြားတဈယောကျမှာ အထငျကွီးစရာ မဟုတျဘူး။ လှတာကို ကွညျ့ပွီး ဗိုကျမတငျးနိုငျဘူး။
လှလို့ ဆိုပွီး ပိုကျဆံ လာပေးမဲ့သူ မရှိပါဘူး။
ယောကျြားလေးတဈယောကျမှာ ပညာရှိရမယျ၊ ကိုယျခွထေောကျအပျေါ ကိုယျရပျတညျနိုငျရမယျ၊
ဝမျးစားအတှကျ ရှာနိုငျတဲ့ အရညျးခငျြးရှိရမယျ။
ဘယျသူမှ ကိုယျသမီးခြောလေးတှကေို အလုပျမရှိအကိုငျမရှိတဲ့ပညာမဲ့နဲ့ သဘောမတူခငျြကွဘူး။
မငျးဆိုရငျရော မငျးသမီးကို သဘောတူမလား?
ဒါကို ငှမေကျတယျလို့ ပွောလို့မရဘူးလေ။
တခြို့မိနျးခလေးတှကေို ရုပျရညျကို ကွညျ့ပွီး အိမျထောငျဖတျရှေးလိုကျကွတယျ။
သူ့အဖခေမျြးသာလို့ သားကို ရှေးလိုကျတယျ။
အဓိက သူကိုပဲ ကွညျ့ပါ..
“သူ ဘာတတျလဲ? ပညာရှိလား?
အလုပျ လုပျတတျလား? ကိုယျ ဘဝလုံခွုံနိုငျမလား? ဆငျးရဲနသေညျဖွဈစေ ရှေးခယျြလိုကျပါ။
သူက ဘာမှမတတျရငျ ကိုယျဒုက်ခဘဲ ရောကျမယျ။ မကျြနှာငယျရမယျ၊ စိတျသောက ရောကျမယျ။
“တခြိနျကို မှနျကွညျ့လိုကျ မကျြနှာသဈဆေး လိမျးနတေဲ့သူလား?
နပေူမှာ အသားမဲမှာ ကွောကျတတျတဲ့ ယောကျြာလား? ဟိုလူကိုလညျး ဒီလူကိုလညျ ကွောကျနတေတျသူလား?
မဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်ချင်နဲ့ ( အရမ်းကောင်းတဲ့စာ ဆုံးအောင်ဖတ်ပါ )
တစ်ခါတုန်းက ကြွက်တစ်ကောင်နှင့် ဖားတစ်ကောင်တို့သည် အချင်းချင်း အဆွေခင်ပွန်းဖွဲ့ နေထိုင်ကြ၏ ။ ကြွက်ဟာ ကုန်းပေါ်သက်သက်မှာသာ နေထိုင်၍ ဖားကျတော့ ကုန်းပေါ် မှာရော ရေထဲမှာရော နေထိုင်နိုင်တဲ့ သတ္တဝါတွေ ဖြစ်ကြတယ် ။ ကြွက်နဲ့ဖား အဆွေခင်ပွန်းဖွဲ့ပြီးတဲ့ကာလမှ သူတို့နှစ်ကောင်ဟာ အတူတကွ ကုန်းပေါ်မှာ သွားလာစား၍ နေထိုင်ကြတယ် …
ယောက်ျားကောင်းလား ယောက်ျားဆိုးလား? ယောက်ျားပီသလား ? ယောင်္ကျား ပီသလား?
အောက်တန်းကျတဲ့ ယောက်ျားက ခင်ဗျား ခန္ဓာကောက်ကြောင်းပေါ်က ရင်တွေ တင်တွေကို ကြည့်ပြီး ခင်ဗျားအချစ်ကို စစ်လားမစစ်လား ဆုံးဖြတ်လိမ်မယ် ယောက်ျားပီသတဲ့ ယောက်ျားကတော့ ခင်ဗျား ခန္ဓာကိုယ်ထက် ခင်ဗျားမိန်းမ ပီသလား မပီသလား ခင်ဗျား မိခင်စိတ်ရှိလား မရှိလားဆိုတာကိုကြည့်ပြီး ခင်ဗျားကို ရွေးချယ်လက်ထပ်လိမ်မယ့် တကယ်ချစ်ရင် Akate တွေ …
အတိတ်မှာနာကျင်ခဲ့ဖူးတဲ့ မိန်းကလေးဆိုရင်လက်လွတ်မခံပါနဲ့ တကယ်လို့များ အမျိုးသားပရိသတ်တွေထဲက တစ်ယောက်တလေများ အတိတ်မှာ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေ ပရဗွနဲ့ ကျရှုံးခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ပတ်သက်ခွင့် ရနေမယ်ဆိုရင်၊ ဒီထက်ပိုပြီး ဝေးမသွားစေဖို့၊ ပိုပြီး နီးစပ်အောင် ကြိုစားဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ အတိတ်မှာနာကျင်ခဲ့ဖူးတဲ့ မိန်းကလေးဟာ သင့်ရဲ့ အချစ်စစ်အချစ်မှန်အတွက် အထိုက်တန်ဆုံးသော ရွေးချယ်မှုဆိုတာကို အောက်ပါအချက်တွေက …